बालबालिका जन्मजात परोपकारी र असल हुन्छन् -
बालबालिका जन्मजात परोपकारी र असल हुन्छन्
बालबालिकासम्बन्धी एउटा प्रचलित भनाई छ । उनीहरु भनेका काँचो माटो हुन्, जसलाई जस्तो स्वरुपमा पनि बदल्न सकिन्छ । यसको अर्थ आमाबुवा, घर परिवार, समाज आदि नै कुनैपनि बालबच्चाको लागि पहिलो मार्गदर्शक हुन् । घर परिवार र समाजले निर्धारण गरिदिएको मूल्य र मान्यतामै एउटा बच्चा हुर्कन्छन् । जीवन कस्तो बनाउने ? भविष्य कतातिर डोहो¥याउने ? सामाजिक उत्तरदायित्व कसरी पुरा गर्ने भन्ने कुरामा पनि उसको घर परिवार र समाज धेरै हदसम्म जिम्मेवार हुन्छ ।
कुनैपनि बच्चा असल वा खराब बन्नुमा घर परिवार र समाज नै मूख्य जिम्मेवार हुन्छ । पारिवारिक मूल्य वा सामाजिक व्यवहारले कुनै बच्चालाई सही मार्गदर्शन दिन्छ भने कतिलाई गलततर्फ धकेल्न पनि सक्छ । यसको अर्थ के भने, कुनैपनि बच्चा जन्मजात खराब हुँदैनन् ।
कुनैपनि बच्चाको मनोवृत्ति कसरी विकास हुन्छ ? उनीहरु कसरी असल वा खराब हुन्छन् ? उनीहरुको आचरण एवं व्यवहार कसरी परिवर्तन हुन्छ ?
यस विषयमा मनोबैज्ञानिकहरुले बर्षौंदेखि विभिन्न अध्ययन अनुसन्धान गर्दै आएका छन् । युनानी दार्शनिक अरस्तूले मानिसले नैतिकताको पाठ जीवनको अनुभवबाट हासिल गर्ने बताउँदै आएका छन् ।
जबकी विश्वचर्चित मनोबैज्ञानिक सिग्मंड फ्रायडले भने बालबालिकाको मनमा चढाइने नैतिकताको भूतले नै उनीहरुको वास्तविकता पहिचान हुने बताएका छन् ।
त्यसो त विभिन्न उपन्यासहरुमा मानिसहरुको खराब प्रवृतिको बारेमा पनि वर्णन गरेको पाइन्छ । व्रिटेनकी राजनितिशास्त्री थोमस हाब्सले भनेका थिए, मानिस प्रवृत्ति जनावरको जस्तो हुन्छ । त्यसलाई नियन्त्रणमा राख्न समाजको नीति नियमको आवश्यकता पर्छ ।
जबकी थोमस हब्सको ठिक विपरित फ्रान्सका दार्शनिक तथा विचारक ज्याङ याक रुसोले भनेका थिए, ‘मानिसहरुलाई नितिनियममा नबाध्ने हो भने उनीहरु विनम्र र अनुशासित रहने गर्छन् ।’
हुन पनि समाजिक संरचना, नितिनियम र धर्मसंस्कारकै कारण मानिस निर्दयी र खराब प्रवृत्तिका बन्छन् । लोभलालच, धनीगरिब बीचको विभेद लगायतका कारण नै कतिपय मानिसमा खराब भावनाले जन्म लिन्छ । परिणामस्वस्प, उनीहरुमा नकारात्मक प्रवृति देखा पर्न थाल्छ ।
यी कुरा आफैमा विरोधाभाष भएका कारण मनोवैज्ञानिकहरु पनि यो कुरा पत्ता लगाउने कोशिशमा रहेका छन् ।
तथापी, मनोबैज्ञानिकहरुले हालै गरेको विभिन्न अनुसन्धानबाट के थाहा पाउन सकिन्छ भने मानिसहरु जन्मजात खराब हुँदैनन् । उनीहरुलाई खराब बनाउने भनेको समाजले हो । अन्यथा, कुनै बेलाका कुख्यात रत्नाकर डाकुपछि गएर महर्षि ऋषि हुँदैनथे होलान् ।
यो कुरा भगवानको रुप मानिने ससाना बालबालिकालाई हेरेर पनि सजिलै अनुमान लगाउन सकिन्छ । बालबालिका भनेका अवोध प्रााणी हुन् । उनीहरुमा कुनै किसिमको छलकपट हुँदैन ।
बीबीसीको एउटा कार्यक्रम ‘बेबीजः द्यर वण्डरफुल वल्र्ड’ ले पनि यो कुरालाई पुष्टि गरिसकेको छ । बीबीसीमा प्रणारण हुने कार्यक्रम ‘बेबीजः द्यर वण्डरफुल वल्र्ड’ मा बालबालिकाको नैतिकतालाई लिएर एउटा अनुसन्धान गरिएको थियो । उक्त कार्यक्रममा बालबालिकालाई एउटा पपेट शो देखाइएको थियो । जसमा तीन किसिमवटा छुट्टा छुट्टै भूमिका थियो ।
जसमा रातो रङ्गको एउटा डल्लोले पहाड चढ्ने कोशिश गरिरहेको थियो भने निलो चौकोश आकारको भूमिकाले भने त्यसलाई रोक्ने कोशिशमा थियो । र, पहेलो रङ्गको त्रिकोणले भने रातो डल्लोलाई पहाड चढ्नमा मद्दत गरिरहेको थियो ।
करिब एक वर्ष हाराहारीका बालबालिकाहरुलाई यो शो हेरेपछि उनीहरुको झुकाव कुन रङ्गको भूमिकामा थियो, भन्नेबारे अध्ययन गरिएको थियो । जसमा उनीहरुले आफ्नो झुकाव पहेलो रङ्गको त्रिकोणतिर रहेको र त्यसैसित खेल्न चाहेको प्रतिक्रिया जनाएका थिए ।
यो अनुसन्धानको नतिजा सन् २०१० मा गरिएको अर्को एक अनुसन्धानसित मेल खाएको थियो । अमेरिकाको येल विश्वविद्यालयको कग्निशन सेन्टरले गरेको उक्त अनुसन्धानमा पनि बालबालिकाको झु
झुकाव असल चरित्रको पपेटप्रति रहेको पाइएको थियो ।
र, यही अनुसन्धानका आधारमा विश्वविद्यालयका बैज्ञानिकहरुले बालबालिकाको झुकाव असर व्यवहारतर्फ रहने गरेको निष्कर्ष निकालेको थियो ।
सन् २०१७मा जापानको क्योटो विश्वविद्यालयले गरेको यस्तै अनुन्धानमा पनि बालबालिकाको झुकाव असर आरचणप्रति रहेको पाइएको थियो ।
त्यतिमात्र होइन, उक्त अनुसन्धानमा बालबालिकाको परोपकारलाई प्राथमिकता दिने गरेको पनि पाइएको थियो । हवार्ड विश्वविद्यालयले गरेको ‘विग मदर स्टडी’ले पनि यो कुरा पुष्टि गरेको छ ।
यी अनुसन्धानबारे बालबालिकालाई कुनै जानकारी थिएन । उनीहरुलाई कुनै डर पनि थिएन । जसले गर्दा उनीहरुको वास्तविकता जान्न बल पुगेको थियो ।
यसको मतलव सिग्मण्ड फ्रायड र होब्स गलत थिए भन्ने पक्कै होइन । तथापी, यसबाट के थाहा पाउन सकिन्छ भने बालबालिका सानैदेखि परोपकारी र असल स्वभावका हुन्छन् ।
यद्यपि, आमाबाबुलाई यो निश्चित गर्न जरुरी छ कि उनीहरु गलत साथीसँगीको संगतमा नपरोस् । कुलतमा नलागोस् । किनकी मानिस जन्मजात जे जस्तो भएपनि पछि गएर उनीहरुलाई असल वा खराब बनाउने भनेको समाज, र खराब प्रवृत्तिले नै हो ।